Xoogsatada Dekeda Muqdisho oo Banaanbax Sameeyay - Wargeyska Faafiye
Home 2014 September 23 .Warka Xoogsatada Dekeda Muqdisho oo Banaanbax Sameeyay
Xoogsatada Dekeda Muqdisho oo Banaanbax Sameeyay
September 23, 2014 · by	Liban Farah ·
Banaan bax Maanta barqadii ka dhacay Barxada Sayidka ayaa waxa isugu soo baxay ku dhawaad labo kun oo Shaqaalaha Dekeda Muqdisho ah kuwaasi oo ka cabanaayay Masuuliyiinta Dekedda oo la xiriirta in qaarkood laga joojiyay Shaqada.
Gudoomiyaha Urur weynaha Shaqaalaha Soomaaliyeed Maxamed Cusmaan oo Warbaahinta kula hadlay Barxada Sayidka ayaa Sharaxaya dhibaatooyinka ugu weyn oo ay kala kulmaan Masuuliyiinta Dekedda waxa uuna ka codsaday Madaxda Dowlada in arrintaasi wax laga qabto.waxa uu Sidoo kale Sheegay in Shaqalaha Dekeda ay heysato dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay in aysan si toos ah u helin xuquuqdoda, waxa uuna xusay in Shaqalaha Dekeda Weligooda aysan arkin ama aysan la kulmin Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha ee Xukuumada Soomaaliya.
Taliye ku Xigeenka Booliska Gobolka Banaadir Cali Maxamuud Cali oo la hadlay dadka Banaanbaxa dhigaayay ayaa u sheegay in loo baahan yahay in ay xalka dajiyaan oo ay ku laabtaan Guryahooda waxauuna xusay in Cabashadooda ay u gudbinayaan Madaxda Dowlada.
Banaanbaxa Maanta aya imaanaya iyado Labo maalin ka hor Dekeda Muqdisho lagu wareejiyay Shirkad laga leeyahay Dalka Turkiga waxana Shalay Baarlamaanka Soomaaliya ay Shirkadaasi ka keeneyn Mooshin.
Afhayenkii hore ee Shabaab oo shalaynaya.
Daawo:Ninkii ugu weeynaa SHIICADA Dalka Masar oo Maanta Dhagax lagu dilay .
Askari Faraniis oo lagu dilay Soomaaliya.
7 caruur oo bam ku dhimatay.